महाबीर पुनले नेपालमै बनाउन थाले स्वाब संकलन गर्ने मेसिन - News20 Media
June 13, 2020 June 13, 2020 N20LeaveaComment on महाबीर पुनले नेपालमै बनाउन थाले स्वाब संकलन गर्ने मेसिन
काठमाडौं : नेपालमा को’रोना भाइरसको रोकथामका लागि सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अब स्वाब संकलनका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन समेत बनाउने भएको छ। आविष्कार केन्द्रले स्वाब संकलन गर्ने मेसिन बनाउन आवश्यक पर्ने सामग्री जापानबाट आयात गरी नेपालमै बनाउन लागेको हो ।
आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता महाबीर पुनले आवश्यक सामग्री जापानबाट नेपाल आइसकेको र केही दिनमै तयार हुने ट्वीटरमार्फत जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार १४ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने कोरोना स्वाब निकाल्ने सुइरो बनाउने थ्रीडी प्रिन्टर र अन्य सामाग्री नेपाल एअरलाइन्समार्फत केहि दिनअघि काठमाडौं आइपुगेको हो ।
‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जापानबाट कोरोना स्वाब निकाल्ने सुईरो बनाउन रु. १४ लाख पर्ने 3D प्रिन्टर र कोरोना रोकथाम गर्न चाहिने अन्य सामानहरु नेपाल एअरलाइन्समार्फत केही दिनअघि काठमाडौं आइपुग्यो । यसको लागि एनआरएनए जापान, एमआरआर जापान र अन्य नेपालीहरु ले रु. २१ लाख आर्थिक सहयोग गरेका थिए ।,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
उनले को’रोना रोकथामका लागि आवश्यक अन्य स्वास्थ्य सामग्री समेत सहयोग भएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि उनले को’रोना रोकथामका लागि माक्स, पीपीई उत्पादन गरी स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई उपलब्ध गराएका थिए। आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता महाबीर पुनले आवश्यक सामग्री जापानबाट नेपाल आइसकेको र केही दिनमै तयार हुने ट्वीटर मार्फत जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको शपथ विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको यस्तो आयो फैसला, सबै परे चकित